Ahoana ny fomba hisamborana Pokémon Mamirapiratra rehetra | Androidsis
Ignacio Sala | 10/07/2021 18:00 | Lalao Android, Pokémon Go
Pokémon Go no iray amin'ny lohateny finday lehibe indrindra eran'izao tontolo izao. Miaraka amin'ny mpilalao an-tapitrisany isan'andro, lalao iray izay manambatra ny Pokémon misambotra amin'ny tontolo tena izy. Shiny Pokémon no tsy fahita firy ao amin'ny Pokémon GO, saingy noho io toro-lalana io dia hanampy anao hanatsara ny paikadinao izahay Sambory Pokémon Mamirapiratra.
Pokémon GO nipoaka tamin'ny lazany tamin'ny 2016, izay nidina an-dalambe ireo mpanazatra Pokémon ary nahazo ny 151 Pokémon misy. Ny mpilalao dia mila mijery ny tontolo iainany tena misy mba hahitana Pokémon miafina any amin'ny tendrombohitra avo, ala mikitroka, na eo akaikin'ny tranony.
1 Inona ireo Pokémon Shiny ao amin'ny Pokémon Go?
2 Ny karazana Pokémon Mamiratra rehetra
2.1 Taranaka voalohany Shiny Pokémon
2.2 Taranaka voalohany Shiny Pokémon
2.3 Taranaka voalohany Shiny Pokémon
2.4 Taranaka voalohany Shiny Pokémon
2.5 Taranaka voalohany Shiny Pokémon
2.6 Taranaka voalohany Shiny Pokémon
3 Ahoana ny fomba hisamborana Pokona Shiny ao amin'ny Pokémon GO
4 Soso-kevitra amin'ny fisamborana Shiny Pokémon
5 Fetsy hisambotra an'i Shiny Pokémon
Inona ireo Pokémon Shiny ao amin'ny Pokémon Go?
Raha tsorina, Shiny Pokémon dia loko isan-karazany. Iray ihany ny karazana loko mamirapiratra isaky ny Pokémon. Miharihary ny fiovana sasany, toa ny Gyarados Shiny, izay mena fa tsy manga. Ny sasany kosa misoko mangina kokoa, toy ny Shiny Bulbasaur na Squirtle, izay mitovy loko nefa misy alokaloka kely ihany.
Pokémon rehetra manana karazana Shiny, fa ao amin'ny Pokémon Go, Shiny Pokémon dia voavaha mandritra ny Andron'ny fiarahamonina na hetsika manokana hafa na amin'ny alàlan'ny fanavaozana mahazatra izay azon'ity lohateny ity.
Raha tsy mamoha i Shiny, na firy na firy amin'ireo Pokémon azonao izany, dia tsy hahita Pokémon Mamirapiratra mihitsy ianao. Etsy ankilany, raha vao voasokatra, Shiny Pokémon dia fahita matetika amin'ny Pokémon Go noho ny amin'ny lalao lehibe, indrindra mandritra ny hetsika.
Na izany aza, tsy dia fahita izy ireo, ka ny safidy tsara indrindra hahitana Pokémon Mamirapiratra dia ny misambotra ny Pokémon tsirairay izay miseho. Ny fotoana fitiliana an'i Shiny dia mitaky fotoana, fa raha vao fantatrao izay karazana mety ho Shiny dia mora kokoa izany.
Ny karazana Pokémon Mamiratra rehetra
Taranaka voalohany Shiny Pokémon
Ahoana ny fomba hisamborana Pokona Shiny ao amin'ny Pokémon GO
Shiny Pokémon dia Pokémon izay manana fahasamihafana loko hafa raha ampitahaina amin'ny endriny voalohany. Ohatra, ny Pokémon toa Trapinch dia volomboasary mamiratra matetika raha ny endriny Mamirapiratra kosa maitso maitso.. Hafa noho ny loko, tsy misy zavatra manokana momba ireo zavaboary ireo.
Na izany aza, Shiny Pokémon dia tsy fahita firy. Ny endrika mamirapiratra dia nampidirina tamin'ity andiany ity tamin'ny Pokémon Gold sy Silver, rehefa nahavita nisambotra Shiny Gyrados tao amin'ny Farihin'i Fury.
Ao amin'ny Pokémon Go, ny elanelan'ny fihazakazahana amin'ny Pokémon Shiny dia manodidina ny 1 amin'ny 450. Misy fotoana sasantsasany amin'ny lalao izay nitombo be ny vintana mihazakazaka ho iray.
Ny zavatra voalohany tokony ho fantatra alohan'ny hivoaka hisambotra an'i Shiny Pokémon dia misy fomba enina samihafa mahaiza maka karazana Shiny ao Pokémon GO:
Amin'ny asa fikarohana
Na izany aza, raha tena te hahomby amin'ny ezaka fisamborana isika, ny tsara indrindra azontsika atao dia ny miandry ny Andron'ny fiarahamonina fa ireo volana dia nankalazaina tao amin'ny Pokémon Go, araka ny fanazavantsika manaraka.
Soso-kevitra amin'ny fisamborana Shiny Pokémon
El Andron'ny fiarahamonina Hetsika iray izay isam-bolana isam-bolana ao amin'ny Pokémon GO. Mandritra ny Andron'ny fiarahamonina, Pokémon manokana dia hampiakatra ny taham-piterahanao mandritra ny fotoana voafetra. Mandritra io fotoana io, ny Pokémon dia hiseho matetika kokoa amin'ny sari-tany ary noho izany dia avo kokoa ny vintana hihaona amin'i Shiny Pokémon.
Notaterin'ny mpilalao fa marina izany 10-20 Pokémon mamirapiratra isaky ny Andron'ny fiarahamonina. Ho an'ny vao manomboka, ny fahafaha-mitombo mety hihaona amin'ny Pokémon mamirapiratra mandritra ny Andron'ny fiarahamonina dia misy ifandraisany betsaka amin'ny isan'ny andrana hisamborana ny Pokémon.
Mba hahitana Shiny Pokémon misimisy kokoa, raha tokony hisambotra Pokémon tsirairay izay miseho ianao dia tsy maintsy mandositra ady ary mandroso mankany amin'ny Pokémon manaraka. Io dia ahafahan'ny mpilalao rzahao Pokémon tsirairay mandra-pahitanao Shiny iray. Ary koa, ny Pokémon Legendary sasany dia mety manana karazana Shiny rehefa miady amin'ny fanafihana.
Ny fomba Mamirapiratra Hiseho izany aorian'ny fandresena ny Pokémon amin'ny ady. Na dia izany aza, zava-dehibe ny fahalalana fa tsy ny Pokémon rehetra no manana endrika Mamiratra. Mba hampitomboana ny mety hisian'ny fananahana Pokémon manjelanjelatra mandritra ny fanafihana dia mila manao fety feno ny fanafihana.
Soso-kevitra ny hanafika mpilalao 20 eo ho eo, izay mampitombo ny isan'ny vintana hahita ireo variana Pokémon ireo. Shiny Pokémon koa dia manana tahan'ny fakana 100%, noho izany mila eo amin'ny lafiny azo antoka ianao hisamborana azy.
Fetsy hisambotra an'i Shiny Pokémon
Ampiasao ny emboka manitra ho ampitomboy ny tahan'ny miteraka Pokémon. Amin'izao fotoana izao, noho ny toe-javatra manodidina ny COVID-19, Pokémon GO dia nampidina ny vidin'ny Incense ao anaty lalao mba hahamora ny filalaovan'ny mpilalao ao an-trano.
Mampiasà Frankincense matetika hampitombo ny fahafaha-mifanena amin'i Shiny Pokémon. Tsy dia fahita firy ny Shiny Pokémon tratra mandritra ny Andron'ny Vondrom-piarahamonina, satria afaka miaraka amina hetsika manokana izy ireo rehefa mivoatra mandritra ny Andron'ny fiarahamonina.
Ny tanjona dia tokony hahatratra Pokémon mamiratra 3 farafaharatsiny mandritra ny Andron'ny fiarahamonina. Raha misy Pokémon dingana telo samy hafa Amin'ny tsingerin'ny fivoarany, ny fananana ny tsirairay avy dia mety amin'ny fampisehoana ny Shiny Pokémon.
Ny Pokémon Mamirapiratra tena tsy misy ilana azy ireo afa-tsy ny fampideraderana. Na dia tsy ny variana Shiny rehetra aza dia tapaka amin'ny lamina mitovy, ohatra, i Rayquaza dia manana endrika mainty sy mainty Mamiratra, raha Pikachu kosa manana loko mavo somary hafa.
Ny Shiny tsirairay dia samy manana ny endriny, izay mampiavaka azy ireo isaky ny miseho. Ary koa, isaky ny miseho amin'ny lalao ny iray amin'izy ireo dia manana sary mihetsika mahafinaritra izy ka tena mahafa-po tokoa ny manampy ireo zavaboary tsy fahita firy amin'ny fanangonana anao, indrindra rehefa sendra Pok'emon mamiratra ilay mpilalao nefa tsy manandrana akory.
Misy iray manontolo fiarahamonina manodidina ny mpilalao Pokémon izay manolo-tena hihaza Pokemon Shiny, ka raha mbola tsy anisan'ireo vondrom-piarahamonina ireo ianao dia tokony manomboka manao izany raha tianao manitatra ny fanangonana Shiny Pokémon anao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Ahoana ny fomba hisamborana Pokémon Shiny rehetra